Halganka u heshaan aad G-booska? Waa xilli ku habboon in aad joojiso ceyrsaneysa Midyahay iyo xoogga saaraan isagoo nolol caafimaad galmo la lammaanahaaga.
Waxaa jira malaayiin haween cidduu doonidiina ee orgasms G-kaalinta dahsoon ayaa marna ku dhamaaday. Dumarka u ooman yihiin foomkan ee lagu naafeeyo in kasta oo la kulma orgasms clitoral kaamil ah.
Waa run in orgasms siilka badanaa way ka xooggan ka badan orgasms gaadhey iyadoo kicinta clitoral; Si kastaba ha ahaatee, orgasms khibradeed ee inta badan haweenka ay tahay clitoral ee dabiiciga ah.
Inkasta oo ay jiraan wax qalad ah in isagoo orgasms oo keliya kicinta clitoral ay, khuraafaadka la xidhiidha natiijooyinka G-booska ka jirta xeryaha cuqdad iyo galmada isku kalsoonaanta oo hoos u dumarka ku guulaysan waydo ugu badan ka hadlay G-kaalinta naafeeyo. Halkan wixii ugu xiisaha badnaa waa in cilmi-weli kalsooni ku saabsan jiritaanka ee G kaalinta.
G-bar ama kaalinta Grafenberg ay magaca ka dhakhtar Jarmalka Dr helay. Ernst Grafenberg, kuwaas oo marka hore ka hadlay zone this erotic gudahood siilka, ayaa ku dhow inay kaadi mareenka sida ku soo laabtay 1950-. In ka badan 60 sano ayaa ka soo wareegtay tan iyo markii ay soo jeedin la dhigay dhakhtar Jarmalka, laakiin waxaa jira weli wax markhaati cad u ah jiritaanka G-kaalinta ee, taasi oo ku qasabtay inay dad badan aaminaan in ay kaliya mala'awaal.
A Daraasad dhawaan daabacay Anatomy joornaal caafimaad ee Clinical u muuqataa in ay ugu dambeyntii lagu bajin quraafaad ku xeeran ka-G kaalinta. Sida ay sheegtay daraasad ay, fikradda ah qaybintii orgasms galay G-rigoore ay dhiiri-, siilka iyo clitoral gabi ahaanba waa qalad. Cilmi lug ku leh daraasaddan ayaa sheegay in ereyga kaliya waa in mid ka mid isticmaalaan dhammaan noocyada orgasms soo gudboonaada haweenka waa “naafeeyo dumar ah”.
Inta lagu guda jiro daraasadda ayaa sheegay in, sexologists yimid in la ogaado in “kintirka gudaha”, taas oo ilaa iyo hadda waxaa la rumeysan yahay in ay kiciyaan orgasms siilka, waa uun mala'awaal. Kintir waa xubin dibadda iyo kaalin muhiim ah ee siinta haweenka ahaanshaha aad u weyn iyada oo lagu naafeeyo; in ay.
Waa in aad hore u maqashay dad sheeganayo in maskaxda waa ugu weyn ee bini'aadanka xubnaha galmada leeyihiin. Daraasad cusub waxaa sidoo kale soo jeediyay in wax la mid ah. Sida ay sheegtay daraasad ay, orgasms dumar ah, ayaa inta badan maskaxda.
Saynisyahanadu waxay ogaadeen in loogu tala galay dumarka ku qanacsan galmada waxaa had iyo jeer ku salaysan lagu naafeeyo siilka. Tani waa wanaagsan; laakiin haweenku waxay leeyihiin si ay u fahmaan in ay sabab u tahay isagoo mayd oo adag, ay haysan karaan orgasms si fudud sida ragga. Waxaa intaa dheer, waa inaysan ku dareemaan liita oo kaliya sababtoo ah waxay ku guuldaraysteen in ay gaaraan lagu naafeeyo kaliya iyada oo lays.
Haa, waxaad la kulmi doonaa dumarka yaa ku odhan doona in ay ku kulma orgasms ka dib markii ay G-kaalinta badalaa dhawr jeer ku dhuftay. Si aanay u jiifa; Si kastaba ha ahaatee, khubaradu ay rumeysan yihiin waxa haweenka Arkaa sida kicinta G-kaalinta asal ahaan waa kicinta dibadda ay kama 'mari.
Waa in aad la yaabban tahay sababta aadan isku dareento. Hadda, in ay su'aalo donta; sharaxaad ugu macquul ah in laga yaabo inay lahaa hay'adaha kala duwan ula dhaqmayso heshaa gaar ah si ka duwan.
Waxaa laga yaabaa in sharaxaad dheeraad ah oo cilmi ah, laakiin maxaad wax adag oo dheeraad ah. In badan oo aad ku fikiri noqon doonaa qeybtu hoose aad ku qanacsan tahay; sidaa, iska baashaasho oo wuxuu ku raaxaysan galmada.